U LIVE - qala ukusakaza, izithombe nezithombe namavidiyo
Yiba ngumqambi we-U LIVE
Qalisa ukusakaza. Thumela izithombe namavidiyo.
Thola kusuka ekubukeni.
Eqa ukuxoxa Vula uhlelo lokusebenza Ukubhalisa Ngena ngemvume
Qalisa ukusakaza, izithombe ezithunyelwe namavidiyo
U LIVE yingxenyekazi lapho abasebenzisi bahlanganyela khona izithombe namavidiyo, bahlangane futhi baxoxe online. Yabelana ngokuqukethwe kwakho noma qala ukusakaza ukuze uxoxe nababukeli ngekhamera yewebhu.
Susa imali ekubukeni kuya ekhadini lakho noma e-wallet.
Iba umsakazi wombukiso wakho
Qalisa umbukiso opholile bese wengeza ukuxhumana okuningi nababukeli. Xoxa ngezindaba zakamuva, yenza ukuma noma ukuqala umhlangano wokudla osheshayo we-chili- ngisho lokhu kungenzeka ku-U LIVE!
Ingxoxo yangasese ikwenza ube nemali eningi umzuzu ngamunye.
Izibukeli zingakubonga ngokusakaza ngokuthumela izinhlamvu zemali ngokuchofoza okukodwa.
Khetha imisebenzi okulungele ukuyenza futhi izibukeli zizokuthumela izinhlamvu zemali ukubona lo mbukiso.
Yenza imali ungaxhunyiwe kwi-inthanethi
Ideshibhodi yakho ingumthombo wemali engenayo. Thumela izithombe namavidiyo, engeza izincazelo ezipholile futhi uqoqe ukubukwa.
Ukubuka ngakunye kwesithombe noma kwevidiyo kukhokhwa yisibukeli; ukubukwa ngakunye okungu-50 - kusetshenziswa insizakalo ye-U LIVE
Yabelana ngesixhumanisi se-Ulive.Chat ngamanethiwekhi omphakathi, uyithumele kuwebhusayithi yakho noma uthumele kubangani bakho ukuthola inzalo ekuthengeni kwalabo ohlanganyele nabo.
Ukubhalisa Ngena ngemvume
Khetha ingqikithi yombukiso wakho
I-U LIVE ivumela ukusakaza okuphathelene nokusebenzisa okwakhelwe ngaphakathi. Akudingeki ucabange ukuthi wenzeni phambi kwekhamera! Khetha itimu nemisebenzi, lungiselela ukuphuma kwakho ngokuya ngekhodi yokugqoka futhi uzuze ngokuxoxa nabalandeli. Vumela ababukeli baqondise i-show yakho.
Unezinkinga ngokuqeqeshwa njalo? Zama ukuhola izinhlamvu zemali ngesikhathi se-yoga noma abashayeli bezindiza!
Khombisa abantu impilo yakho yansuku zonke futhi ukwenze kujabulise ngokwenza imisebenzi kusuka kubabukeli.
Ngaba nezinyo elimnandi? Thola izinhlamvu zemali zokudla amaswidi kwikhamera. Khombisa ababukeli ukuthi uthanda kangakanani ama-carbs!
Xoxa ngendlela othanda ngayo
Ukusakazwa kwe-ULIVE kwethulwa ngokuchofoza ezimbili nje. Zama ubone ukuthi kulula kanjani lokho!
I-Autotranslator eyakhelwe ngaphakathi
Thumela umlayezo kwabangaphandle ngolimi lwakho lwendabuko kanye ne-autotranslator eyakhelwe ngaphakathi kuzokwenza konke.
Abasakazi abaningi bakhetha ukushiya imfihlo yabo ngasese. ULE LIVELA likuvumela ukuthi ukhethe izinga lokungaziwa kahle. Vele usebenzise ukuvimba komsebenzisi nokufaka umbala emazweni athile.
Ukukhishwa kwemali okulula
Isamba esincane sokukhipha yi- $ 10. Sebenzisa i-VISA, i-Mastercard, i-Paypal, i-Payoneer, i-Yandex, i-QIWI, i-SEPA, izinsiza ze-Bitsafe noma uthole i-invoyisi yokukhipha imali.
Ungakholelwa ukuthi kulula kakhulu?
Lihlole bese uhola namuhla!
Ukubhalisa Vula uhlelo lokusebenza Ngena ngemvume
Imigomo Yokusebenzisa Inqubomgomo yobumfihlo Creator Agreement Affiliate agreement Ukuxhaswa
Yiba ngumenzi wokuqukethwe Kwababhali bamakhophi Uhlelo lobumbano Kwezinhlangano eziyimodeli I-FAQ